Abesifazane abakwaHormones abafake uchungechunge lwezinhlayiyi - Abadli be-AASraw
/ Imikhiqizo / AmaHormoni amaSifazane
Singabanikazi bamaHormones abaphakeli be-powder, amaHormone amaFormones e-powder athengiswa, Njengoba sithembisile, wonke amaHommoni ethu amaHormones powder ahlanzekile angaphansi kwe-98%.
Amantombazane amaHormones powder
Amakhomoni anemiphumela eminingi ebalulekile empilweni yabesifazane. Amahomoni angama-sex hormones, i-estrogen ne-progesterone, ayaziwa kakhulu ngenxa yefuthe labo emndenini wesifazane wokuzala, kusukela esikhathini ukuya ekukhuleleni ukuya esikhathini sokuqeda isikhathi nokunye. Kodwa umzimba wakho wenza futhi usebenzise ezinye izinhlobo eziningi ze-hormone ezithinta ezinye izici zempilo yakho-kusuka ezingeni lakho lamandla, isisindo, isimo sengqondo nokunye okuningi. Izinguquko eziningi phakathi neminyaka eholele ekunqophiseni isikhathi (ukuphela kwesikhathi) zilethwa amazinga ama-hormone akhiqizwa ama-ovari, ikakhulukazi i-estrogen.
Kuye kwacatshangwa ukuthi lokhu kuthuthukiswa kwebele kusana olusanda kuzalwa kubangelwa amahomoni wesifazane i powder (ama-oestrogen) emzimbeni womama odabula i-placenta ngenkathi ekhulelwe futhi evuselela ukuthuthukiswa kwebele emntwaneni.
I-hormone ebaluleke kakhulu eyenziwa ama-ovariya ayaziwa ngokuthi ama-hormone e-sex female (i-sex steroids) - kanti okubili okuyinhloko yi-estrogen ne-progesterone. Ama-ovaries akhiqiza enye ye-hormone yesilisa, i-testosterone.
Ngesikhathi sokukhulelwa, i-estrogen ivuselela ukuthuthukiswa kwebele futhi ibangela ubulili, isisu (isizalo) nama-tublopian tubes (athatha amaqanda esibelethweni) ukuvuthwa.
Iphinde ibambe iqhaza ekukhuleni komzimba futhi iguqule ukusatshalaliswa kwamafutha emzimbeni wesintombazane, okuholela ekutheni kube nokuningi okufakwe emaceleni, emathangeni nasemathangeni. I-Testosterone isiza ukukhuthaza ukukhula kwemisipha nokukhula kwethambo.
I-Estrogen. Njengoba i-hormone eyinhloko "yesifazane", i-estrogen ikhuthaza ukukhula kanye nempilo yezinsikazi zokubeletha futhi igcina ubulili buhlanjululwa, bunwebeka (belula), futhi buhlinzekwa kahle ngegazi. Amazinga e-Estrogen ngokuvamile ayancipha ngesikhathi sokuqala, kodwa enza kanjalo ngendlela engavamile. Ngezinye izikhathi kungaba khona ama-estrogen amaningi ngesikhathi sokuhamba kwesikhathi kunesikhathi esedlule.
Ngaphezu kwe-estrogen, amazinga ama-hormone akhiqizwa ama-ovaries-progesterone (elinye i-hormone yesifazane) kanye ne-testosterone (i-hormonone yesilisa ekhiqizwa emazingeni aphansi kwabesifazane) -yabuye ishintsha phakathi neminyaka yakho yokuphila, njengoba ichaziwe etafuleni elingezansi.
Ukunciphisa okuncane phakathi kwe-progesterone kuthinta isikhathi sokuya esikhathini kunokuba kuthinte umsebenzi wezocansi, kodwa ukwehla okuhlobene nobudala ku-testosterone kunganciphisa i-libido (ukushayela ucansi) phakathi kwabesifazane base-midlife, nakuba lokhu kuqhubeka kungqubuzana. Ukuthi i-estrogen inqamule ngaphezu kwe-testosterone iholela abanye bakholelwe ukuthi i-libido akufanele iyanqamuka ngesikhathi sokuya esikhathini. Ukuncipha kwe-testosterone kwabesifazane kuhlobene nobudala kuphela, hhayi ukuhambisana nokuya esikhathini, futhi kuqala iminyaka ngaphambi kokuqala kwesikhathi.
I-Estradiol powder (E2), futhi i-oestradiol epelapelled, i-estrogen hormone ye-estrogen kanye ne-hormone yama-sex female enkulu. Kuhileleka ekulawuleni imijikelezo yesisu yokubeletha yesisu nokuya esikhathini. I-Estradiol powder ibhekene nokuthuthukiswa kwezici zesondo zobulili ezijwayelekile ezifana namabele, ukukhuliswa kweziqhwa, kanye nephethini lomfazi lokusabalalisa amafutha kwabesifazane futhi kubalulekile ekwakhiweni nasekugcinweni kwezicubu zokubeletha zabesifazane njengama-glands amantombazane, isisu , ne-vagin ngesikhathi sokukhulelwa, ukukhulelwa, nokukhulelwa. Kubuye kube nemiphumela ebalulekile kwezinye izicubu eziningi ezihlanganisa amathambo, amafutha, isikhumba, isibindi, nobuchopho.
I-AASraw ihlinzeka ngokuyinhloko ngama-powders eluhlaza we-estradiol powder, i-estradiol powder Benzoate, i-estradiol powder valerate, i-ethinyl estradiol powder, njll. Zonke ziqinisekisiwe ngenxa yokuhlanzeka, ikhwalithi kanye nokudla okuqinile.
Ukubonisa 1-8 of 20 imiphumela
I-Hydroxyprogesterone i-caproate powder
I-Allylestrenol powder (i-432-60-0)
I-Delmadinone i-Acetate powder
I-Desogestrel powder (i-54024-22-5)